ပြည်ပ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း - KBZ Bank
Home / ဝန်ဆောင်မှုများ / ငွေလွှဲလုပ်ငန်း / ပြည်ပ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း
ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံတကာမှ ကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အသင်းဖွဲ့များနှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်နေသောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ နိုင်ငံတကာသို့ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာဖြင့် အပြန်အလှန်ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။
International Fund Transfer to KBZ Accounts(Thunes)
ငွေလွှဲပေးပို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပေးဆောင်ရန်ငွေပမာဏ
ရန်ကုန်တိုင်းပြင်ပသို့ ငွေလွှဲဆောင်ရွက်လျှင် သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားများအတိုင်း ပေးဆောင်ရပါမည်။
***နှုန်းထားများသည်အကောင့်နံပါတ်၊ reference code နှင့် ငွေထုတ်ယူနိုင်သော ဘဏ်များပေါ်တွင် မူတည်၍ အပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။
Singapore – CIMB , DBS Bank
နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်သို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု
ကိုရီးယား၊ မလေးရှား နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများအနေဖြင့် TransferTo (Thunes) ချိတ်ဆက်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်သို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ TransferTo (Thunes) သည် နိုင်ငံတကာမှ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကို အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသော ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အများဆုံးပေးပို့နိုင်သော ငွေပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅,၀၀၀ (​အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေ )
TransferTo (Thunes) ၏မိတ်ဖက်များ
ငွေလက်ခံသူသည် ငွေလက်ခံရန် ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ (ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း၊ စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း သို့မဟုတ် ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း )
မိမိကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်သို့ ငွေလွှဲတိုက်ရိုက်လက်ခံ ရရှိခြင်း။
ငွေလွှဲကို မြန်မာကျပ်ငွေအဖြစ် တိုက်ရိုက်လက်ခံရရှိခြင်း။ (အချိန်နှင့်တပြေးညီလက်ခံရရှိခြင်း)
ATMကတ် သို့မဟုတ် KBZPay မှ ငွေသား အလွယ်တကူထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။
Tranglo သည် နိုင်ငံတကာမှ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကို အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသော ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိထားသည့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ငွေလွှဲကောင်တာများရှိသော Tranglo နှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်တို့ လက်တွဲချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ပြည်ပတွင်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်များ၏ ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်သို့ အလွယ်တကူ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
Tranglo ၏ မိတ်ဖက်များ
Ria (Inbound ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်း)
Ria Money Transfer သည် ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင့် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းအဖြစ် ချိတ်ဆက်လိုက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေလွှဲ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသောသူများမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ မိမိတို့၏ အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်ရှိသူ၊ မိသားစုဝင်များ၏ KBZ Bank အကောင့်များထံသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိုက်ရိုက်လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ ပေးပို့နိုင်သော ငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ငွေလွှဲလက်ခံမည့်သူအနေဖြင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘဏ်အကောင့်ရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း (Saving Account) – Individual and Joint
စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း [Current Account (OD)] – Individual and Joint
ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း (Call Account)- Individual and Joint
ချေးငွေရယူထားသော ဘဏ်အကောင့် (Loan Bank account) – Individual and Joint (linked to current account)
ကဒ်ဘဏ်အကောင့် (Card Bank account) – Individual (Linked to current account)
ငွေလွှဲပေးပို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ငွေသားထုတ်ယူမည့်ဘက်မှ ဝန်ဆောင်ခပေးဆောင်ရန်မလိုပါ
အများဆုံးပေးပို့နိုင်သော ငွေပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅,၀၀၀ (​အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅,၀၀ နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေ)
ငွေလွှဲကို မြန်မာကျပ်ငွေအဖြစ် တိုက်ရိုက်လက်ခံရရှိခြင်း။ (အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ လက်ခံရရှိခြင်း)
Western Union (Inbound ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်း)
Western union သည် အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းတခုဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများထံသို့ ငွေလွှဲပေးပို့ရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ
ပေးပို့နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးသော အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ MTCN ဂဏန်း၁၀လုံးဖြင့် ငွေသားထုတ်ယူမှုပြုလုပ်နိုင်ပါမည်။
MTCN ဂဏန်း ၁၀လုံး
မြောက်ကိုရီးယား၊အာမေနီးယား နှင့် အီရန် နိုင်ငံများမှအပ ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိနိုင်ငံများအားလုံးမှ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Telegraphic Transfer ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ(SWIFT SYSTEM မှတစ်ဆင့်) မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘဏ်အကောင့်အချင်းချင်း ငွေလွှဲပြောင်းကိစ္စရပ်များကို ဆိုလိုပါသည်။
အခြားနိုင်ငံမှ လွှဲပြောင်းလျှင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
KBZ swift code သိရှိရန်
ငွေလွှဲပေးပို့လိုသော အချက်အလက် အကြောင်းအရာများ
အမေရိကန်ဒေါ်လာအကောင့်နှင့်ငွေလွှဲဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အမေရိကန် ၁၁ဒေါ်လာ သို့ ၁၁ဒေါ်လာနှင့် ညီမျှသော စင်ကာပူဒေါ်လာ/ယူရိုငွေ ကိုပေးဆောင်ရပါမည်
မြန်မာကျပ်ငွေအကောင့်နှင့် ငွေလွှဲဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ၁၂၀၀၀ ကျပ် ပေးဆောင်ရပါမည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြင်ပဖြစ်ပါက မြန်မာကျပ်ငွေ၁၂၀၀၀ အပြင် သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားများအလျောက် ပေးပို့ရာတွင် ပေးဆောင်ရပါမည်
လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများသည် ငွေပေးပို့မည့် အကြောင်းအရာအပေါ်မူတည်၍ ကွာခြားပါသည်။(ဥပမာ-သဘောတူညီမှု/စာချုပ်/ပြေစာ/စသဖြင့်)
*ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ချေးငွေနှင့်ပို့ကုန်၊CMP ကုန်ကျမှုများအတွက် ငွေလွှဲပေးပို့ရာတွင်လည်း လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ တစ်ပါတည်း ပါရှိရပါမည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် ငွေလွှဲပေးပို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်(Certificate of incorporation + Company Extract (DICA))
MIC Permit (မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကော်မရှင် အောက်မှခွင့်ပြုထားသော ကုမ္ပဏီများ)
ဗဟိုဘဏ်မှ ချေးငွေအတွက် ခွင့်ပြုကြောင်းစာ
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရွက်(Certificate of incorporation + Company Extract (DICA))
ပို့ကုန်လိုင်စင် (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် မလိုသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ အတွက် တင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ)
***အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ အထက်ငွေလွှဲဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွပူးတွဲတင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။
Western Union (Outbound ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်း)
Western union သည် အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းတခုဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများထံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှငွေလွှဲပေးပို့ရာတွင် လွယ်ကူလျှင်မြန် ယုံကြည်စိတ်ချစွာပေးပို့နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးသော အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ MTCN ဂဏန်း၁၀လုံးဖြင့် ငွေသားထုတ်ယူမှုပြုလုပ်နိုင်ပါမည်။
အများဆုံးပေးပို့နိုင်သော ငွေပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3000
တစ်ခါတစ်ရံ ငွေလွှဲမည့်နိုင်ငံ၏ payout procedure အရ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ထပ်နည်းနိုင်ပါသည်။
*တခါတရံ ပေးပို့ရမည့်နိုင်ငံတွင်ရှိသော အေးဂျင့်များ၏ အချိန်ကွာခြားမှုနှင့် သတ်မှတ်မူဝါဒများကြောင့် အနည်းငယ် ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်သည့် နှုန်းထားများသည် western union system ဘက်မှ အလိုအလျောက်တွက်ချက်ထားသောနှုန်းထားများဖြစ်ပါသည်။*နှုန်းထားများ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြောင်းလဲမှုများရှိနိုင်ပါသည်
လက်ခံမည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင် သို့ ပတ်စပို့
အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ငွေလွှဲဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အမေရိကန်၂၅ ဒေါ်လာပေးဆောင်ရပါမည်
မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် ငွေလွှဲဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ၃၂၀၀၀ ကျပ် ပေးဆောင်ရပါမည် ( ငွေလွှဲပေးပို့သူဘက်မှသာလျှင် ဆောင်ရွက်ငွေကုန်ကျမည်သာဖြစ်ပါသည် )
မြောက်ကိုရီးယား၊အာမေနီးယား နှင့် အီရန် နိုင်ငံများမှအပ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကျန်နိုင်ငံများ သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ငွေလွှဲပေးပို့မည့် အကြောင်းအရာအလိုက် ပေးရမည့် စာရွက်စာတမ်း ကွာခြားမှုရှိပါသည်
(အမေရိကန် ၊ ကနေဒါ နှင့် မက္ကစီကို နိုင်ငံများသို့ ငွေလွှဲပေးပို့မည်ဆိုပါက ပြည်နယ် (သို့) မြို့နယ်အမည်များကိုဖော်ပြရပါမည်။တချို့သောနိုင်ငံများအတွက် စစ်ဆေးမှုမေးခွန်းများကို TSMF တွင်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး တချို့နိုင်ငံများတွင် သတ်မှတ်ထားသော ငွေလက်ခံပမာဏပါရှိပါသည်။)
လွှဲပို့ငွေပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ USD 20,000 အထိကို USD 25 အနည်းဆုံးပေးဆောင်ရမည်။
လွှဲငွေပမာဏ USD 20,000 နှင့်အထက်လွှဲငွေများအား လွှဲငွေပမာဏအပေါ်တွင် 0.125%.
ငွေလွှဲပို့သည့် ငွေကြေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကောက်ခံပါသည်။
Swift Charges: USD 10 (1st Oct, 2018 နေ့မှစတင်၍)
အခြားဝန်ဆောင်ခများ USD 10 + Swift USD 10 (အမှားပြင်ဆင်ခြင်း / ငွေလွှဲစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း /ငွေလွှဲ ရှာဖွေမှုစုံစမ်းခြင်း (Tracer)/ ငွေလွှဲ ဖျက်သိမ်းခြင်း)
ဤ၀န်ဆောင်ခများအားလုံးသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှင့် အခြားငွေကြေးများသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် ညီမျှသည့်ငွေပမာဏကိုတွက်ချက်ကောက်ခံပါမည်။
အခြားငွေကြေးအရောင်းအ ၀ယ်များ၏မည်သည့်၀န်ဆောင်ခမဆိုဘဏ်မှသတ်မှတ်သည့် အမေရီကန်ဒေါ်လာ (USD) ငွေလဲနှုန်းပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲသွားမည်။
Trade payment အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ
ပေးပို့ရမည့် အကြောင်းအရင်းများအား ရှင်းပြသည့်စာ( ကုမ္ပဏီ letterheadနှင့်တကွ)
နိုင်ငံခြား အပ်ငွေအကောင့်( ကုမ္ပဏီအကောင့် )
တင်သွင်းသောသင်္ဘောပါကုန်ပစ္စည်းစာရင်း/ လေကြောင်းပါကုန်ပစ္စည်းစာရင်း/ကုန်တင် ပြေစာ အတိအကျ
Commercial ပြေစာ မူရင်း
နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္တူ( တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက်)
Non-trade payment အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
ပေးပို့ရမည့် အကြောင်းအရင်းများအား ရှင်းပြသည့် စာ( ကုမ္ပဏီ letterheadနှင့်တကွ)
တခြားအထောက်အပံ့ဖြစ်သောစာရွက်စာတမ်းများ(ပြေစာ၊စာချုပ်၊သဘောတူညီမှုစာချုပ်၊စသဖြင့် ငွေလွှဲမည့် အကြောင်းအရာပေါ်တည်၍ကွဲပြားပါသည်ဥပမာ-ကျောင်းလခပေးသွင်းခြင်း၊တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခပေးသွင်းခြင်း၊ခရီးသွားစရိတ်များ၊ကုန်တင်ပို့ခ စရိတ်များ နှင့် လစာပေးသွင်းခြင်းများ)
သင်ချစ်ရသောသူများကို ငွေလွှဲပေးပို့ရန် အမြန်ဆုံးသောနည်းလမ်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မည့်သည့်နေရာမဆို ငွေလွှဲဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
ငွေလွှဲပေးပို့မှုများကို အကောင့်တစ်ခုကနေ အခြားအကောင့်တစ်ခုသို့ပေးပို့နိုင်သလို ငွေသားထုတ်ယူမှုများလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ
KBZ နှင့် သက်ဆိုင်ချိတ်ဆက်သောဘဏ်များမှတိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်ပါသည်။ (အခြားဘဏ်များမှပေးပို့လိုပါက (intermediary bank) ကြားခံဘဏ် အသုံးပြု၍လည်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ )
15 Sumitomo Mitsui Banking Corproration SMBCSGSG USD Singapore
Cathay United Bank UWCBTWTP USD Taiwan
18 Bangkok Bank Public Company Ltd. BKKBTHBK USD,THB Thailand
19 Siam Commercial Bank Public Company Ltd. SICOTHBK USD Thailand
20 Krung Thai Bank Public Company Ltd. KRTHTHBK USD Thailand
21 Kasikorn Bank Public Company Ltd. KASITHBK USD, THB Thailand
ITRS codes – Codes for International Transactions Reporting System
1100 – Exports
1200 – Imports
2110 – Sea transport
2120 – Air transport
2130 – Other transport
2210 – Sea transport
2220 – Air transport
2230 – Other transport
2310 – Sea transport
2320 – Air transport
2330 – Other transport
2340 – Postal and courier services
2510 – Business travel
2520 – Personal travel
3100 – Manufacturing services
3200 – Maintenance and repair services
3310 – Construction abroad
3320 – Construction in Myanmar
3410 – Insurance premiums
3420 – Insurance claims
3430 – Financial services fees
3500 – Charges for use of intellectual property (royalties and license fees)
3610 – Telecommunication
3620 – Computer services
3630 – Information service
3710 – Research and development services
3720 – Professional and management consulting services
3725 – Operating lease(rental of equipment)
3730 – Technical, trade-related, and other business services
3740 – Audiovisual and related services
3750 – Personal, cultural, and recreational services
3800 – Services to government not included elsewhere
4100 – Dividends
4300 – Interest
4400 – Taxes
4500 – Subsidies
4600 – Rent
4700 – Compensation of employees
5200 – Workers’ remittances
5300 – Other personal transfers
5400 – Grants for infrastructure and purchase of capital goods
5500 – Development assistance
5600 – Other current transfers
7. Transactions in claims (assets) on nonresidents
7100 – Equity
7200 – Debt between affiliated enterprises
7310 – Long-term debt securities
7320 – Short-term debt securities
7400 – Options, futures, warrants, swaps, etc.
7510 – Loans, long-term
7520 – Loans, short-term
7530 – Trade credits and advances, long-term
7540 – Trade credits and advances, short-term
7600 – Deposits
7800 – Other
8. Transactions in liabilities to nonresidents
8100 – Equity
8200 – Debt between affiliated enterprises
8250 – Payments of local expenses of resident affiliates by their parent companies
8310 – Long-term debt securities
8320 – Short-term debt securities
8400 – Options, futures, warrants, swaps, etc.
8510 – Loans, long-term
8520 – Loans, short-term
8530 – Trade credits and advances, long-term
8540 – Trade credits and advances, short-term
8600 – Deposits
8800 – Other
9000 – Transfer of funds between residents’ accounts
9100 – Transfer of funds between banks resident in Myanmar
9200 – Transfer of funds of resident banks with banks abroad
9300 – Deposits to and withdrawals from residents’ accounts
9400 – Purchase and sale of foreign currency between residents and residents banks (9400)’ accounts
10100 – Foreign exchange realized gains or losses
မှတ်ချက် ။ ။ SWIFT Message Type 103 ၏ Field number 77B (Regulatory Reporting) တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပါက ITRS Code ကိုသာ ထည့်သွင်းဖော်ပြပါရန်။ eg. 4100
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် Field number 77B (Regulatory Reporting) ကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့် ကာလတွင် Field number 70 (Remittance Information) ၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်ဖြစ်ပြီး ITRS Code/particular information Format အတိုင်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်။ eg. 2110/Freight services from Singapore